Xisbiga Moderaterna oo soo jeediyay in Haweenka loo ogolaado ilmo iska soo riditaanka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaXisbiga Moderaterna oo soo jeediyay in Haweenka loo ogolaado ilmo iska soo riditaanka
Xisbiga Moderaterna oo soo jeediyay in Haweenka loo ogolaado ilmo iska soo riditaanka
Xisbiga muxaafidka ayaa soo jeediyay wax ka badal lagu sameeyo sharciga, haweenka loogu ogolaanayo inay ilmo iska soo ridaan.
“Xaaladda caafimaad ee isbaddelaysa waxay xoojineysaa baahida loo qabo sharci casri ah oo ilmo iska soo ridka ah oo kordhinaya xuquuqda haweenka ay u leeyihiin inay go’aan ka gaaraan masiirka uurka iyo inay si ku habboon ula qabsadaan daryeelka,” ayuu yiri guddoomiyaha xisbiga, Ulf kristersson oo ku qoray maqaal dood ah oo ka dhacday Aftonbladet, oo ay ka qaybgaleen afhayeenka siyaasada bulshada ee xisbiga, Camilla Walterson iyo hogaamiyaha dumarka ee muxaafidka, Josephine Malmkvist: Waxay ku haboontahay baahida haweeney kasta.
Waxay yiraahdeen waa in sharciga loo badalaa qaab dumarka doonaya inay daawo ka helaan farmashiyaha si gurigooda iskaga soo ridaan uurka.
Konserfatifka ayaa sidoo kale aaminsan in aan la aqbali karin in haweenku ay sugaan waqtiga dheer ee ilmo iska soo ridida. Taa baddalkeeda, Guddiga Qaranka ee Caafimaadka iyo Daryeelka waa in loo xilsaaraa inuu jaangooyo waqtiyada sugitaanka iyobsoo jeedin si loo hubiyo in ilmo iska soo ridka la sameeyo.
Intaas waxaa sii dheer, gudoomiyayaashu waxay rabaan in dowlada ay kordhiso dhaqaalaha lagu soo rido ilmaha.